Boqor Burhaan oo Soomaalida ugu baaqay in ay dhammaystiraan inta ka dhiman Airport-ka Boossaaso – Radio Daljir
Boqor Burhaan oo Soomaalida ugu baaqay in ay dhammaystiraan inta ka dhiman Airport-ka Boossaaso
Janaayo 8, 2016 1:02 b 0
Boossaaso, 08, June, 2015 – Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada ku dhaqan Puntland in ay ku dadaalaan sidii ay u dhammaystiri lahaayeen Airport-ka Boossaaso.
“Waxaan ummada ugu baaqayaa in ay iska kaashadaan sidii ay wadajir ugu dhammaystiri lahaayeen 1 KM oo ka dhiman Garoonka, arrintaas waa mid Soomaali oo dhan u taala, waana tillaabo u baahan iskaashi buuxa.
Boqor Buhaan ayaa sidoo kale waxaa uu MD Xassan Sh. Maxamuud Iyo Madaxwayne Cabdiwali Cali Gaas ugu baaqay in ay wax ka qabtaan duufaannadii dhawaan ku dhuftay gobolka Gardafuu ee Puntland.
Siyaasi Salaad Cali Jeelle oo Puntland uga mahad-naqay gurmadkii ay u fidiyeen Qaxootiga Yaman.
Khudbadihii issimada Puntland oo wali ka socda xarig-jarka Garoonka Caalamiga ah ee Boossaaso